Kooxda West Ham oo taako u dhigtay Liverpool + SAWIRO – Gool FM
Kooxda West Ham oo taako u dhigtay Liverpool + SAWIRO
Dajiye February 4, 2019
(Premier League) 05 Feb 2019. Kooxaha West Ham iyo Liverpool ayaa dhibcaha ku kala qeybsaday London Stadium, kadib markii ay ku kala bexeen barbaro 1-1, kulan ka tirsanaa kulamada 25-aad ee horyaalka Premier League
Ciyaarta ayaa qeybta hore lagu kala nastay barbaro 1-1 ah.
Daqiiqadii 22-aad Sadio Mane ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa Liverpool, wuxuuna ka dhigay 1-0, kadib markii uu caawin ka helay James Milner.
Laakiin 28 daqiiqo marka ay ciyaarta mareysay Michail Antonio ayaa goolka barbaraha u dhaliyay West Ham, wuxuuna ka dhigay 1-1, xili uu caawinta goolkan lahaa Felipe Anderson.
Dib marka leysugu soo laabtay ciyaarta Liverpool ayaa lasoo baxday dardar xoogan si ay markale hogaanka ugu qabtaan ciyaarta, iyadoo ay weeraryahanadeeda ay sameeyeen fursado cajiib ah, balse West Ham ayaa kala hor tagtay iska caabin xoogan .
Ugu dambeyn ciyaarta ayaa ku soo idlaatay barbaro 1-1 ah, Liverpool ayaana markale 2 dhibcood muhiim ah iska qasaarisay, wuxuuna haatan noqday farqiga u dhexeeya iyaga iyo Manchester City 3 dhibcood kaliya.
“Sarri wuxuu garanayaa sida aan ku bixin lahaa qaab ciyaareed wanaagsan” - Higuaín